छोरीको जीवन गर्भमा मात्रै ! - छापा खबर - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
छोरीको जीवन गर्भमा मात्रै !
छोरा मोहका कारण महिलाले छोरीको भू्रणहत्या गर्ने क्रम बढेको छ।
लिंग पहिचान गर्न महिला स्वास्थ्य संस्थामा गएर अल्ट्रासाउन्ड गर्छन् र छोरी भएमा हत्या गरिदिन्छन्। सीमावर्ती क्षेत्रका महिला भने भारतीय सहरमा पुगेर लिंग परीक्षण गराउँछन्। यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा दिनेश गौतमले लेखेका छन्।
अध्ययनमा संलग्न महिलाले पति र सासूले छोरा जन्माउन दबाब दिने गरेको बताएका छन्। ती जिल्लाका दसवटा सरकारी स्वास्थ्य संस्था ९तीन अस्पताल, तीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र चार स्वास्थ्य चौकी० मा नियमित परीक्षणमा आउने चारदेखि ६ महिनाका गर्भवतीसँग पहिलो चरणको अन्तर्वार्ता गरिएको थियो।
पहिलो चरणमा नियमित गर्भ जाँच गर्न आउने २ सय ६० जना गर्भवतीलाई सहभागी गराइएको थियो। दोस्रो चरणमा तीन सय ४९ आठदेखि नौ महिनाका गर्भवतीसँग अन्तर्वार्ता गरिएको थियो।
पहिलो चरणमा समावेश तीन सय ६० गर्भवती महिलालाई के चाहनुहुन्छ? भनेर सोध्दा ३६ प्रतिशतले छोरा भनेका थिए। तीन गर्भवतीमध्ये एकजनाले छोराको चाहना राखेका थिए।
त्यस्तै ६ मध्ये एकजनाले छोरीको चाहना राखेका थिए। आधाजसो महिलाले छोराछोरी जे भए पनि हुने बताएका थिए। पतिको चाहना छोरा भएको अध्ययनमा सहभागी एक तिहाइ महिलाले बताएका थिए।
एउटी छोरी मात्र भएका ७३ प्रतिशत महिलामा छोराको चाहना उच्च भएको पाइएको छ। उच्च शिक्षा हासिल गरेका महिलामा भने हालको गर्भप्रति छोराको चाहना कम भएको देखिएको छ। जातजातिका आधारमा हेर्दा बाहुन, क्षेत्री, पहाडी जनजाति र पहाडी दलित महिलामा छोराको चाहना बढी देखिएको छ।
प्रकाशित २ चैत २०७५, शनिबार | 2019-03-16 06:49:14